Nofaranan'ny Google tamin'ny volana Aogositra ny lalana APK ho an'ny AAB | Androidsis
DaniPlay | | Fampiharana Android, About us
Rehefa afaka taona maro niaraka taminay, ny endrika APK dia hanjavona ao amin'ny Play Store amin'ny volana Aogositra. Google mamarana ny fiainany aorian'ny fandehanan'ny fotoana malina ary manapa-kevitra ny hanambara ny AAB (Android App Bundle), endrika vaovao izay azo antoka fa tsy dia mavesatra loatra amin'ny voalohany ary hamarana ny ankamaroan'ny piraty.
Ireo mpandrindra izay te-hiasa hatrany dia tsy maintsy mizatra amin'ny AAB, noho izany dia mbola manana roa volana eo ho eo izy ireo. Fotoana malina izao, indrindra ny fahafantarana fa ny fanangonana vaovao dia hiova raha ny fenitra izay eto amintsika ankehitriny.
1 Fahatakarana lehibe
2 Miady amin'ny piraty ny AAB
3 Asa kely ilaina amin'ny fiovam-po
4 Fiovana ilaina
Dom Elliot, mpitantana ny Google Play, ao amin'ny fidirana bilaogy ofisialy dia manazava fa hatramin'ny volana Aogositra dia tsy ekena ny fandefasana fangatahana APK. Manery anao hampiasa AAB izany, izay etsy ankilany kosa dia handray ambany latsaky ny APK voajanahary, zavatra hanamaivanana ny fahatsiarovan'ny telefaona.
Fampiharana Android App Bundle (AAB) mampihena ny haben'ny 15%, izay ho ela dia ho tsara ho an'ireo olona izay matetika mametraka rindrambaiko samihafa amin'ny findainy. Izay ilaina fotsiny no ampidinin'ny mpampiasa, izay loharano tsy dia mavesatra toa ny zava-mitranga ankehitriny.
Handray tombony ilay olona, ​​satria hanararaotra ny processeur sy ny sary ampiasain'ny fitaovana finday izy ireo, ka tsy hampiditra be loatra ny terminal. Hamboarina ny kinova, ny zava-drehetra raha toa ka manaiky ny fitaovana, noho izany dia tsy mitovy amin'ny telefaona tsy dia matanjaka loatra amin'ny iray manana hery ambony kokoa.
Miady amin'ny piraty ny AAB
Ny AAB (Android App Bundle) dia hiady amin'ny piratySarotra ho maimaimpoana ny rindranasa sy ny lalao raha manana vola avy amin'ny developer izy ireo. Ho an'ity dia hampiasaina amin'ny fomba voafetra ny rakitra iray, na dia nesorina aza dia tsy ho mora ny manova azy.
Ny rindranasa novaina dia tsy azo vakiana amin'ny telefaona rehetra, ka na dia fitaovana voajirika aza izy io dia tsy ho tohanan'ny smartphone rehetra. Ireo algorithms dia hilalao betsaka eto, izany no mahatonga ny endrika AAB mamely ny Play Store, taorian'ny nampidirina tamin'ny taona 2018.
Manana asa mialoha ny mpandraharaha, indrindra raha te hanavao sy hanafatra ny asanao indray ianao mba ho azo alaina ao amin'ny magazay Google Play. Ny AAB dia takiana eto, fa tsy any ivelan'ny magazay, ka izany no hitohizan'ny endrika APK amin'ny vavahady sasany.
Asa kely ilaina amin'ny fiovam-po
Google, amin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy, milaza fa 'ho an'ny ankamaroan'ny rindranasa, asa kely dia kely no takiana mba hamoronana AAB fa tsy APK. Ny fisafidianana safidy hafa indrindra amin'ny fotoana fananganana dia avy eo fizahan-toetra izany ho toy ny mahazatra. Ny app bundle dia endrika loharano misokatra mifanentana amin'ireo fitaovana fananganana lehibe toa ny Android Studio, Gradle, Bazel, Buck, Cocos Creator, Unity, Unreal Engine, ary motera hafa. Ny Play Core Native ary Play Core Java & Kotlin SDKs.
Orinasa maro sahady no manana ny ampahan'ny fitaovany aondrana any amin'ny AAB, anisan'izany ny sasany fantatra amin'ny anarana hoe Adobe, Gameloft, Duolingo, Netflix, redBus, Twitter ary Riafy. Anisan'izany, maro hafa no hiseho mandritra ny volana Jolay, manantena fa amin'ny volana Aogositra, farafaharatsiny, mihoatra ny 60% no hifanaraka.
Raha vantany vao te-hisintona rakitra avy amin'ny Play Store ianao ho lasa AAB ilay rakitra fa tsy APK, koa aza mailo raha manomboka mahita azy amin'ny volana Aogositra ianao. Na dia tsy manana daty marina aza izy dia amin'ny herinandro voalohan'io volana io vao manomboka mahita an'io endrika io isika.
Google dia niasa nandritra ny taona maro hanoloana ny APK amin'ny endrika AABEfa telo taona mahery ny fitsapana, fitsapana ary fanitsiana. Dingana iray hafa indray ho an'ny mpamorona, satria te-hahita valisoa amin'ny asany izy ireo, satria ny sasany very vola be noho ny piraty.
Te hamaky vaovao ny orinasa rehefa nahita ny voalohany ny orinasa lehibe, anisan'izany ny tambajotra sosialy bilaogy bitika Twitter, saingy tsy izy irery. Ny hafa dia efa miasa amin'ny fahafahany miova amin'ny endrika haingana mba hananana azy io afaka iray volana mahery.
Io dia hahafahan'ny orinasa miasa amin'ny endrika izay manome lanja ny kalitao ary hahasoa ny antoko rehetra, ao anatin'izany. Google dia mahita ny AAB ho safidy mety indrindra ho an'ny mpamorona rehetra, ao anatin'izany ny olona manokana izay mihantona fampiharana iray na maromaro farafaharatsiny.
Ny rindranasa sasany dia mety ajanona, arakaraka ny fanavaozan'izy ireo na tsia ny ao anatiny, mbola ho hita eo ihany hoe ahoana ny valiny voalohany avy amin'ny mpamorona amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia mamarana ny format APK amin'ny volana Aogositra mba hanome lalana ny AAB